Itoobiya oo ku dhawaaqday goobaha ay ka hawlgeli doonaan ciidammadeeda Baddu | Berberanews.com
Itoobiya oo ku dhawaaqday goobaha ay ka hawlgeli doonaan ciidammadeeda Baddu
April 21, 2019 | Published by: Maax
Sarreeya Guud Birhaanuu Julaa oo wareysi ay la yeelatay wargeyska ‘Addis Zemen’ oo afka dowladda ku hadlo ayaa sheegay “iney dolwadda Itoobiya ay ka shaqeyn hayso sidi ay u dhisna lahayd ciidama bad oo adag.”
“Ciidamada badda ee ay Itoobiya dhisaneysana waxay noqon doonaan ayuu yiri kuwa tababar casri ah leh isla-markaana qalabki ugu dambeeyey ee ciidamada badda adeegsada.”
“Waa inaan muujinnaa sameynta siyaasadeed ee ay Itoobiya ku leedahay dhinaca badda. Waddama badan ayaa meela fogfog ka imanaya si ay badaha dariska nala ah ay saameyn ugu yeeshaan oo saldhigyo ka sameeysto. Annagu waxaan nahay waddan facweyn oo ay ku nool yihiin shacab ka badan 100 milyan. Marka ma jiri karto sabab aan bad la’aan u noqon karno”.
Sida uu sheegay Sareeya guud Birhaanu Julaa, “inaga oo kala tashanyeno waddamada aan saaxibbada nahay waxaan dhammeeystirnay qaab dhismeedka ay ciidamada badda ee Itoobiya lahaanayaan, waxaana muddo gaaban loo gudan galay meel marinta qorshahaasi.”
“Waxaan dhisaynaa ciidammo xoog badan oo badeed, kuwaas oo ugu xoog badan Afrika”. ayuu yiri ra’isal wasaaruhu.
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa marki ugu horreysay bishi June ee kal hore ku dhawaaqay inuu dalkiisu doonayo inuu dhisto ciidamo bad, isaga oo ka dhawaajiyey inuu xiriir arrintaasi ku saabsan uu kala yeeshay Asmara iyo Muqdisho xiriir dhaqale iyo mid amniba ay dalalkaasi yeelanayaan.